Masoja Anorova Vanotengesa Mumigwagwa muHarare
Masoja arova vanhu vanotengesera mumigwagwa yemu Harare nhasi akavatorera zvinhu zvavanga vachitengesa.
Hwange huri hwekiti negonzo muHarare neChipiri mangwanani masoja anga achifamba nemapurisa eZRP pamwe nemapurisa ekanzuru, achimhanyisa vanotengesera mumigwagwa.
Mumwe wevanotengesera mumigwagwa, VaVictor Gutuza, vati vamwe vavo varohwa vakatorerwa zvinhu zvavo vakasungwa.
Muzvare Sarudzayi Mudende vati havasi kufara nezviri kuitwa nemasoja vachiti kutengesa ndiko kuri kuraramisa mhuri yavo.
"Tiri kutoshaya kuti toita seyi. Hakuna mabasa, tiri kutopererwa kushaya kuti vana tinovapa chii. Zvavari kuita izvi hazvina kunaka. Dai vambomira nokuti mabasa akavharwa," Muzvare Mudende vanotsanangudza.
VaZachariah Zumbika vanotiwo kutorerwa kwavaitwa zvinhu nemasoja nemapurisa pamwe nevekanzuru, kwavasiya vasina chokubata. VaZumbika vati dai hurumende yagadzirisa nyaya dzekushaikwa kwemabasa.
VaGutuza vati havasi kuzobuda mumigwagwa kudzamara hurumende yavhura maindasitiri.
Hatina kukwanisa kutaura naMeya weHarare, VaBenard Manyenyeni, kuti tinzwe divi ravo panyayaiyi.
Mutauriri wekanzuru, VaMichael Chideme, vakati vanoda kuti vanotengesera mumigwagwa vashandire munzvimbo dzakatarwa nekanzuru kuti vatengesere asi vanotengesera mumigwagwa vanoti nzvimbo idzi dziri kure nevatengi uye havakwane vese kushandira munzvimbo idzi.
Hatina kukwanisa kutaura nevatauriri vemapurisa nemasoja, Amai Charity Charamba naColonel Overson Mugwisi kuti tinzwe divi remapurisa nemasoja panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo.